43475219 1160749 10344834 31969636
काठमाडौं ।मनोहरा तरकारी बजारभित्र एउटै कम्पाउण्डमा प्याज प्रतिकिलोमा ६० रुपैयाँ मूल्य फरक भेटिएको छ ।महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आज गरेको अनुगमनका क्रममा सुनापति आलु प्याज सप्लायर्सले प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १२० रुपैयाँमा बेचेको पाइएको हो । त्यही कम्पाउण्डमा रहेको सलेज आलु प्याज भण्डारले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बेचेको छ । यस पसलमा उपभोक्ताको भीड लागेको थियो ।यो प्याज सो पसलले ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गरेको थियो तर बेचेको थिएन । अरु पसलमा अनुगमन समितिले खरिद बिल मागेको देखेपछि यस पसलले भाउ घटाएर ६० बनाएको हो । यो रमिता हेरिरहका उपभोक्ता भन्दै थिए -'हिजो बेलुका प्याज किन्न आएको, १४० रुपैयाँ प्रतिकिलो भनेकाले फर्केको थिएँ । आज त्यही प्याज ६० मा बेचेको हेर्न पाइयो ।'त्यसकै सामुन्ने रहेको पनौती सैजु आलु प्याज भण्डारमा व्यापार गर्ने महिलाले भनिन् -'म रुँग्न मात्र बसेकी दाम थाहा छैन ।' उनले दाम थाहा पाउने बोलाउनु भनिन् तर बोलाइनन् । अर्को जेनिसा आलु प्याज भण्डारमा होलसेल मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेको पाइयो ।अनुगमन समितिले त्यहाँ भएका होलसेल प्याज व्यापारीलाई कागजात लिएर कृषि बिभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ । बजारमा प्रतिकिलोका दरले कागती बेच्ने व्यापारीले मनोहरा नदीतर्फको एउटा सटर लिएर होलसेल चलाएका छन् । बजारभरि उनकै कागती बिक्री हुन्छ । तर उनले कसैलाई पनि बिल दिएका छैनन् । उनको सटरमा २ जना महिला कुहिएका र सद्दे कागती छुट््याउँदै थिए । उनीहरुले व्यापारीको नाम बताएनन् । फोन गर्दा व्यापारीले फोन उठाएनन् ।छेउमा भएका लसुन व्यापारीले आफूहरुलाई होलसेलबाट बिल प्राप्त नहुने बताए । यतिञ्जेलमा एकापट्टिका व्यापारी पसल छोपेर भागि सकेका थिए । अनुगमन टोलीले बजार क्षेत्रमा पानी वितरण गर्न आएको आक्वा व्रदर ब्राण्डका कुच्चिएका जार नष्ट गरेको छ । जारमा पानी भरिएको मिति उल्लेख थिएन । कतिपय जारबाट पानी चुहिएको थियो ।अनुगमन टोलीले के. एल. दुगड ग्रुपको गोदामको निरीक्षण गरेको थियो । महानगरको वडा ३२ मा दुगडको करीब ३ हजार १ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमताको गोदाम छ । यस गोदाममा चामल, दाल, तेल भण्डारण तथा वितरण हुने गरेको छ । अनुगमन समितिले वडामा दर्ता गर्न, बिक्री वितरण नहुने सामाग्री राख्न छुट्टै कक्षको स्थापना गर्न, खाद्यान्न भण्डारणलाई कीराबाट बचाउन गरिएको फुमिगेसन रेकर्ड अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
८ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:२३
मनोहरा तरकारी बजारभित्र एउटै कम्पाउण्डमा प्याज प्रतिकिलोमा ६० रुपैयाँ मूल्य फरक भेटिएको छ ।
महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आज गरेको अनुगमनका क्रममा सुनापति आलु प्याज सप्लायर्सले प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १२० रुपैयाँमा बेचेको पाइएको हो । त्यही कम्पाउण्डमा रहेको सलेज आलु प्याज भण्डारले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बेचेको छ । यस पसलमा उपभोक्ताको भीड लागेको थियो ।
यो प्याज सो पसलले ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गरेको थियो तर बेचेको थिएन । अरु पसलमा अनुगमन समितिले खरिद बिल मागेको देखेपछि यस पसलले भाउ घटाएर ६० बनाएको हो । यो रमिता हेरिरहका उपभोक्ता भन्दै थिए -‘हिजो बेलुका प्याज किन्न आएको, १४० रुपैयाँ प्रतिकिलो भनेकाले फर्केको थिएँ । आज त्यही प्याज ६० मा बेचेको हेर्न पाइयो ।’
त्यसकै सामुन्ने रहेको पनौती सैजु आलु प्याज भण्डारमा व्यापार गर्ने महिलाले भनिन् -‘म रुँग्न मात्र बसेकी दाम थाहा छैन ।’ उनले दाम थाहा पाउने बोलाउनु भनिन् तर बोलाइनन् । अर्को जेनिसा आलु प्याज भण्डारमा होलसेल मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेको पाइयो ।
अनुगमन समितिले त्यहाँ भएका होलसेल प्याज व्यापारीलाई कागजात लिएर कृषि बिभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ । बजारमा प्रतिकिलोका दरले कागती बेच्ने व्यापारीले मनोहरा नदीतर्फको एउटा सटर लिएर होलसेल चलाएका छन् । बजारभरि उनकै कागती बिक्री हुन्छ । तर उनले कसैलाई पनि बिल दिएका छैनन् । उनको सटरमा २ जना महिला कुहिएका र सद्दे कागती छुट््याउँदै थिए । उनीहरुले व्यापारीको नाम बताएनन् । फोन गर्दा व्यापारीले फोन उठाएनन् ।
छेउमा भएका लसुन व्यापारीले आफूहरुलाई होलसेलबाट बिल प्राप्त नहुने बताए । यतिञ्जेलमा एकापट्टिका व्यापारी पसल छोपेर भागि सकेका थिए । अनुगमन टोलीले बजार क्षेत्रमा पानी वितरण गर्न आएको आक्वा व्रदर ब्राण्डका कुच्चिएका जार नष्ट गरेको छ । जारमा पानी भरिएको मिति उल्लेख थिएन । कतिपय जारबाट पानी चुहिएको थियो ।
अनुगमन टोलीले के. एल. दुगड ग्रुपको गोदामको निरीक्षण गरेको थियो । महानगरको वडा ३२ मा दुगडको करीब ३ हजार १ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमताको गोदाम छ । यस गोदाममा चामल, दाल, तेल भण्डारण तथा वितरण हुने गरेको छ । अनुगमन समितिले वडामा दर्ता गर्न, बिक्री वितरण नहुने सामाग्री राख्न छुट्टै कक्षको स्थापना गर्न, खाद्यान्न भण्डारणलाई कीराबाट बचाउन गरिएको फुमिगेसन रेकर्ड अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अनुगमन, प्याजको भाउ ६० रुपैयाँ फरक
Prevलिम्बु संस्कृतिमा आधारित नयाँ गीत ‘ज्यानै हाजिर भो’ सार्वजनिक (भिडियो)
वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम ऋणपत्र जारी गर्दैः यस्ता छन्,फाइदाNext
भक्तपुरमा मासु तथा खाद्यान्न पसल अनुगमन
कालीमाटी क्षेत्रका खाद्य स्टोरहरुमा अनुगमन : ‘प्याकेजिङ् खाद्यबस्तुको खोलमा भएको मिति हातैले मेटियो’
होटलले चैतको पारिश्रमिक दिए/नदिएको अनुगमन हुने